प्रकाश १९ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१९ यी कुराहरू भएपछि मैले स्वर्गमा ठूलो भीडको सोरजस्तो एउटा चर्को आवाज सुनें। अनि तिनीहरूले यसो भने: “हल्लेलूयाह!* उद्धार, महिमा अनि शक्ति हाम्रा परमेश्वरकै हुन्‌, २ किनकि उहाँको इन्साफ सही अनि न्यायोचित छन्‌। आफ्नो अवैध यौनसम्बन्धद्वारा* पृथ्वीलाई भ्रष्ट पार्ने महावेश्यालाई उहाँले दण्ड दिनुभएको छ अनि त्यससित आफ्ना दासहरूको रगतको बदला लिनुभएको छ।” ३ अनि तुरुन्तै दोस्रो पटक तिनीहरूले यसो भने: “हल्लेलूयाह! त्यसको धुँवा सदासर्वदा मास्तिर उठिरहन्छ।” ४ त्यसपछि, चौबीस जना एल्डर र चार वटा करूब सिंहासनमा बस्नुहुने परमेश्वरसामु घोप्टो परे अनि उहाँको उपासना गर्दै यसो भने: “आमिन! हल्लेलूयाह!” ५ अनि सिंहासनबाट एउटा आवाज पनि आयो र त्यसले यसो भन्यो: “हे परमेश्वरको डर मान्ने उहाँका साना ठूला सबै दासहरू हो, हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गर।” ६ त्यसपछि, मैले ठूलो भीडको सोरजस्तो, धेरै पानी बगिरहेको आवाजजस्तो र गर्जनको चर्को आवाजजस्तो एउटा आवाज सुनें। तिनीहरूले यसो भने: “हल्लेलूयाह, किनकि हाम्रा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर यहोवाले राजाको रूपमा शासन गर्न थाल्नुभएको छ। ७ आओ, हामी रमाऔं र असाध्यै खुसी होऔं अनि उहाँको महिमा गरौं, किनकि थुमाको विवाह हुन लागेको छ र तिनकी दुलहीले आफूलाई तयार पारिसकेकी छिन्‌। ८ हो, तिनकी दुलहीलाई उज्यालो, सफा मलमलको लुगा लगाउन दिइएको छ, किनकि मलमलको लुगाको अर्थ पवित्र जनहरूले परमेश्वरको स्तरबमोजिम गरेका असल कामहरू हुन्‌।” ९ त्यसपछि, तिनले मलाई भने: “लेख: आनन्दित हुन्‌ तिनीहरू, जसले थुमाको विवाहको प्रीतिभोजको निम्तो पाएका छन्‌।” अनि तिनले मलाई यसो पनि भने: “यी परमेश्वरले भन्नुभएका सत्य वचनहरू हुन्‌।” १० यो सुनेर म तिनको उपासना गर्न तिनको पाउमा घोप्टो परें। तर तिनले मलाई भने: “होसियार! त्यसो नगर! किनकि म तिम्रो अनि तिम्रा भाइहरू, जसले येशूको साक्षी दिने काम पाएका छन्‌, तिनीहरूको सँगी दास मात्र हुँ, बरु परमेश्वरको उपासना गर; किनभने येशूको विषयमा साक्षी दिनु नै भविष्यवाणीहरूको उद्देश्य हो।” ११ त्यसपछि, मैले स्वर्ग उघ्रेको देखें अनि हेर, एउटा सेतो घोडा पनि देखें। त्यसमा सवार हुनेको नाम विश्वासी अनि सत्य रहेछ र तिनले परमेश्वरको स्तरबमोजिम न्याय गर्नुका साथै युद्ध गर्दा रहेछन्‌। १२ तिनका आँखा बलिरहेको आगोको ज्वालाजस्ता थिए र तिनको टाउकोमा धेरै ताज थिए। साथै, तिनमा एउटा यस्तो नाम लेखिएको थियो, जसको अर्थ तिनलाई बाहेक अरू कसैलाई थाह थिएन, १३ अनि तिनले रगतको छिटा परेको लुगा लगाएका थिए र तिनको नाम थियो, परमेश्वरको वचन। १४ साथै, तिनको पछि-पछि सेता घोडाहरू चढेर स्वर्गका सेनाहरू आइरहेका थिए अनि तिनीहरूले सेता, सफा मलमलको लुगा लगाएका थिए। १५ राष्ट्रहरूलाई प्रहार गर्न तिनको मुखबाट लामो धारिलो तरबार निस्किरहेको थियो। तिनले फलामको डन्डाले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछन्‌ अनि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको भयानक क्रोधको कोल पनि पेल्नेछन्‌। १६ तिनको लुगामा अनि तिघ्रामा राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभु भन्ने नाम लेखिएको थियो। १७ मैले सूर्यको अगाडि उभिरहेको एउटा स्वर्गदूतलाई पनि देखें अनि आकाशमा उड्ने सबै चराहरूलाई तिनले चर्को सोरमा कराएर यसो भने: “यहाँ आओ, परमेश्वरको ठूलो भोज खान भेला होओ। १८ तिमीहरूले राजाहरूको मासु, सेनापतिहरूको मासु, ठूलाठालुहरूको मासु, घोडाहरूको मासु, घोडसवारहरूको मासु अनि के स्वतन्त्र, के दास, के साना, के ठूला, सबैको मासु खान पाउनेछौ।” १९ त्यसपछि, घोडामा सवार हुने र तिनका सेनासित लडाइँ गर्न जङ्गली जनावर, पृथ्वीका राजाहरू अनि तिनीहरूका सेनाहरू एकसाथ भेला भएको मैले देखें। २० तब त्यो जङ्गली जनावर र त्यसको अगाडि चमत्कारहरू गर्ने झूटो भविष्यवक्ता पक्राउ परे। यो त्यही झूटो भविष्यवक्ता हो, जसले त्यस्ता चमत्कारहरू गरेर जङ्गली जनावरको चिन्ह लिने अनि त्यसको मूर्तिको उपासना गर्ने मानिसहरूलाई बहकाउँथ्यो। अनि ती दुवैलाई गन्धकको अग्निकुण्डमा जिउँदै हुर्ऱ्याइयो। २१ तर बाँकी अरू भने घोडामा सवार हुनेको मुखबाट निस्किरहेको लामो तरबारद्वारा मारिए। अनि सबै चराहरूले अघाउन्जेल तिनीहरूको मासु खाए।
^ प्रका १९:१ * हिब्रूमा यसको अर्थ हो, “हे मानिसहरू हो, यहोवाको प्रशंसा गर।”
^ प्रका १९:२ * अतिरिक्त लेख ४ हेर्नुहोस्।